Miatrika fahaverezana tsy ampoizina amin'ny mpanaraka Instagram marobe ve ianao?
Eo koa ny fahasahiranana hamantarana ny antony ao ambadik’izany ? TSARA, mitovy aminay ihany io. Manontany tena matetika aho hoe nahoana aho no very mpanaraka ao amin'ny Instagram na dia eo aza ny ezaka rehetra nataoko sy izay rehetra nataoko mba hisarihana mpanaraka..
koa, Nanatsoaka hevitra aho fa mila vahaolana ny olana rehetra. Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity, hanampy anao izahay hamantatra ny antony mahavery ny mpanaraka ny Instagram anao ary hanampy anao hamaha azy ireo.
Nahoana ianao no very mpanaraka ao amin'ny Instagram ?
Ny fahaverezan'ny mpanaraka dia ampahany voajanahary amin'ny traikefa Instagram ary dingana iray amin'ny fananganana ny kaontinao Instagram.. Tsy ny rehetra no hankasitraka foana ny fitaovanao, ny olona sasany dia mety hanao hetsika manaraka sy tsy manaraka, ary azonao atao fotsiny ny manao fihetsika izay mitarika ny hafa tsy hanaraka anao nefa tsy fantatrao.
Fa ny olana dia ity : maninona aho no very mpanaraka amin'ny Instagram ? Mba hanomezana valiny an'ity fanontaniana ity, nous avons fourni ici les 5 raisons possibles pour lesquelles vous perdez une partie ou la plupart de vos followers sur Instagram.
1.	Lasa mifantina kokoa ny olona ao amin'ny Instagram
Instagram efa nisy hatry ny ela ; nitombo hatrany ny isan'ny mpampiasa nandritra ny taona maro ary, Ary noho izany, niova ny tsiron'ny ankamaroan'ny olona momba ny karazana votoaty tiany ho hita ao amin'ny sakafony.
Midika izany fa mety ho very mpanaraka ny Instagram ianao noho ny famoahana votoaty taloha na tsy misy dikany..
2.	Zara raha mandefa ao amin'ny Instagram ianao, na matetika loatra.
Raha tsikaritrareo fa ny isan'ny mpanaraka ao amin'ny Instagram dia mihena haingana kokoa noho ny fitomboany, mety ho diso ny fahazarana fandefasanao.
Raha tsy mandefa hafatra matetika ianao, ny mpanjifanao dia tsy hanana fahafahana hamaky ny atiny ao amin'ny famahanana vaovao, izay mety hahatonga azy ireo tsy hanaraka anao intsony. Etsy ankilany, raha mandefa hafatra matetika loatra ianao, inenina isan'andro na mihoatra, mankaleo izany ary mety hahatonga ny mpanjifanao tsy hanaraka anao intsony.
3.	Fihetseham-po voalohany tsy mety
Ny fahatsapana voalohany dia fototra, koa tandremo sao manimba azy ! Na ahoana na ahoana, ankoatra ny sarinao, Ny zavatra voalohany hojeren'ny mpanaraka vaovao dia ny bio anao, koa ataovy izay hameno azy amin'ny references na quotes azo antoka.
4.	Ny tsy fahampian'ny mazava sy ny tsy fitoviana amin'ny lohahevitra
Raha tsy misy dikany ny vaovaom-baovaonao, miaraka amin'ny sary hafa tanteraka, loko sy loko tsy mifanaraka ary kalitaon'ny sary miovaova, atahorana hamono mpanaraka mety ianao. Etsy ankilany, raha manana votoaty miavaka sy singa tsy miovaova ianao, hahazo mpanaraka tsy ho ela ianao. Koa tandremo tsara ny milalao nefa tsy miova.
5.	Soso-kevitra mankaleo na tsy manintona
Ny sary manaitra dia mety hiteraka fientanentanana amin'ny mpanaraka anao, fa mahasarika ny sain'ny mpamakinao kosa ny fanazavana. Ary noho izany, raha mankaleo na tsy mahasarika ny soratrao, ho leo ny mpanjifanao ary mety tsy hanaraka anao koa.
1.	Mahaiza mandanjalanja ary ampifanaraho amin'ny fanovana
Tsy azo ihodivirana ny fiovana, indrindra amin'ity tontolo an-dàlam-pandrosoana ity sy amin'ny Instagram. Koa mianara mampifanaraka amin'ny fironana vaovao ary mahaiza mandanjalanja amin'ny fomba fijerinao azy.. Mamorona sy mizara atiny sy lohahevitra malaza amin'ny fahanao, ary tsy isalasalana fa hahazo mpanaraka maro be ianao.
2.	Manàna toerana voalanjalanja sy tsy tapaka
Rehefa mandefa tsy tapaka amin'ny fahanao ianao, ny mpanaraka anao dia hanomboka hianatra ary ho lasa mahazatra kokoa ny atiny tsirairay, indrindra raha mahasarika. Noho izany, manana hetsika voalanjalanja sy tsy tapaka de 1 à 2 posts par jour, ary hitombo ny isan'ireo mpanaraka anao.
3.	Profile fantatra
Tsotra izany : ny hany ilainao dia sary manintona sy tsara kalitao, ary koa ny references sy ny mari-pahaizana malaza amin'ny mombamomba anao. Amin'izao fomba izao, ny olona manaraka anao dia te hanaraka anao.
4.	Aoka ho tsy miovaova sy marina amin'ny votoatinao
Ny fanovana atiny matetika dia mahasosotra. Ary noho izany, manana atiny marina rehefa mandefa amin'ny Instagram ; mijanona amin'ny lohahevitra iray ary milalao ny lalao. Azonao atao anefa ny manova ny atiny mifototra amin'ny hetsika kalandrie., toy ny andron'ny mpifankatia sy ny hafa.
5.	Manaova angano mahaliana sy mahasarika
Ny sary iray fotsiny dia tsy ampy hanangonana mpanaraka ; mila angano koa ianao. Ny fananana lohateny mahaliana dia manampy amin'ny fisarihana sy hitazonana mpanaraka bebe kokoa amin'ny kaontinao. Tena ilaina amin'ny sehatra media sosialy rehetra izany, koa mamoròna angano izay hanaitra ny fahalianan'ny mpanaraka anao ankehitriny sy ho avy.
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hahazoana vola amin'ny Instagram tsy misy mpanaraka 2021 : Fomba 9 hanaovana
Lahatsoratra manarakaAhoana ny fandefasana horonan-tsary Instagram amin'ny iPhone-nao : 3 Fomba sy fampiharana